आलमलाई जोगाउने को-को ? - Pardeshi Khabar
आलमलाई जोगाउने को-को ?
Post by: परदेशी खबर प्रकाशीत मिति: October 26, 2019
काठमाडौं : मोहम्मद अफताब आलमलाई सघाउने सम्भावित व्यक्तिमाथि प्रहरीले निगरानी सुरु गरेको छ। पीडितले न्याय पाउने गरी अनुसन्धान गर्न प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्की र जिल्ला प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीलाई प्रहरी मुख्यालयले निर्देशन दिएको छ।
प्रहरीकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थप कानुनी प्रक्रियामा गइरहनु नपर्ने निर्णय गरेपछि अनुसन्धानले पूर्णविराम लिएको थियो। २०६४ चैत २७ गते स्थानीय शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। उक्त घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रहरीले २०६५ असार ९ गते रौतहट सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असार ३० गते आरोपितविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पीडितले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो। सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरी सुरुबाटै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले प्रकाशित गरेका छन ।
« कुवेतमा एक नेपाली कामदारको दुर्घाटनामा परी निधन (Previous News)
(Next News) रोल्पाका शनि बने पहिलो नेपाल लोकस्टार »